देश Archives - Page 350 of 388 - Purbeli News
प्रधानमन्त्रीको कार्टुन फेसबुकमा कार्टुन सेयर गर्दा वडा सचिव पक्राउ
काठमाडौं / फेसबुकमा कार्टुन सेयर गरेका कारण काभ्रेमा एक जना सरकारी कर्मचारी पक्राउ परेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गरी समाजमा भ्रम फैलने गरी कार्टुन सेयर गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको हो । काभ्रेको रोशी गाउँपालिका ५ का वडासचिव होमनाथ सिग्देललाई महानगरीय अपराध महाशाखाले मंगलवार पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले सिग्देलको घरवाटै उनलाई पक...
प्रधानमन्त्रीको सवारी ढिलो हुँदा प्रहरी भोक–भोकै !!
इटहरी । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले प्रदेश १ मा छन् । उनि मंगलबार हवाई मार्ग हुदै काठमाडौबाट बिराटनगर आएका थिए । मोरङको बिराटनगरमा गोबर ग्यास उदघाटन गर्न अनि पार्टीको प्रशिक्षणमा सहभागी हुन उनि बिराटनगर आएका हुन । ओली मंगलबार राती इटहरीस्थित नेपाली सेनाको पूर्वी पृतना हेडक्वाटरमा बस्ने प्रबन्ध गरिएको थियो । तर उनि बढीमा ७ बजे भित्र पृ...
दुई बालिकाको मृत्यु
कञ्चनपुर / कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका–१० विकास बस्तीका दुई जना बालिकाको माछा मार्ने क्रममा आज दोदा नदीमा डुबेर मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा १४ वर्षीया अञ्जली चौधरी र १० वर्षीया माला राना रहेका छन् । साथीसँगै माछा मार्न गएका दुवै बालिकाको डुबेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक ज्ञानबहादुर सेटीले बताउनुभयो । मृतक...
ईदकाे अवसरमा भाेली बुधबार सार्वजनिक बिदा
बुटवल / मुस्लिम समुदायको महान् पर्व बकर ईद (इदुल जोहा) का अवसरमा प्रदेश ५ सरकारले भोलि बुधबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव मधु पौडेल (ज्ञवाली) ले आज एक सूचना जारी गरीे मुस्लिम समुदायको महान् पर्व बकर ईद (इदुल जोहा) का अवसरमा प्रदेश सरकारले भदौ ६ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको जनाएको छ । ...
मालपोत कार्यालयबाट बैंकिङ कारोवार
काठमाडौँ / सरकारले मालपोत कार्यालयबाट बैंकिङ कारोवार सेवा शुरु गर्न लागेको छ । आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मुलुकका १३१ मालपोत कार्यालयबाट बैंकिङ कारोवार सेवा शुरु गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कार्यालय समयमा कारोवार गर्ने गरी काउण्टर स्थापनाका लागि विभिन्न बैङ्कसँग समन्...
काठमाडौँ / के तपाईं कुनै पनि रोजगारीको अवसर नपाएर हैरान हुनुहुन्छ ? अब चिन्ता नगर्नुस्, सरकारले तपाईंको योग्यता, सीपअनुसारको रोजगार उपलब्ध गराउने छ । यदि रोजगार उपलब्ध नभए ‘निर्वाह भत्ता’ दिनेछ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको ‘रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’मा सरकारले बेरोजगार नागरिकलाई एक आर्थिक व...
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु माफीयाबाट सञ्चालन भएका छन् : जितेन्द्र देव
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् राष्ट्रिय सभाका सांसद जितेन्द्र नारायण देवले प्रधानमन्त्री कार्यालय र हरेक मन्त्रालयहरु माफियाहरुले चलाएको आरोप लगाएका छन् । उनले भने,‘सरकार त कम्युनिष्ट नामधारीमात्रै हो । कामधारी होईन् । सरकारसँग दुई तिहाई भएकोले केही गर्छकी भन्ने आशा थियो । तर, केहीपनि गर्न सकेन्।’ पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका सांसद ...
कामपाले दश प्रतिशत बहाल कर उठाउने
काठमाडौँ / काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा १० प्रतिशत बहाल कर उठाउने भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १२ प्रतिशत बहाल कर सङ्कलन गर्दै आएको कामपाले यस आवमा भने १० प्रतिशत बहाल कर उठाउने भएको हो । कामपाले चालु आर्थिक वर्षका लागि नागरिकलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यले विभिन्न सिफारिस दस्तुर निःशुल्क गरेको छ । निःशुल्क गरिएका सिफारिसमा नाबालक, स्वास्थ...
काठमाडौँ / राष्ट्रिय परिचय पत्र तयार गरी वितरण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन केन्द्रले हाल परिचय पत्रको परीक्षण गरिरहेको छ । केन्द्रका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीका अनुसार कात्तिक १५ देखि छाप्ने काम शुरु गर्ने र त्यसलगतै वितरण गर्ने तयारी रहेको बताउनुभयो । ‘‘अहिले परिचय पत्र परीक्षण गर्ने काम भइरहेको छ, कम्पनीले ...
काठमाडौँ / काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो सबै वडामा रहेको खुल्ला सार्वजनिक स्थानको पहिचान र संरक्षणको कामलाई अघि बढाएको छ । ३२ वडा रहेको कामपामा हालसम्मा वडा नं ३, २९ र ६ मा रहेको सार्वजनिक जग्गाको पहिचान भइसकेको छ । वडा नं ३ मा १५ रोपनी, ६ मा १० रोपनी र २९ मा ९ रोपनी सार्वजनिक जग्गाको पहिचान भएको कामपा भौतिक पूर्वाधार महाशाखाका प्रमुख इञ्जिनीयर राम...